Chọọchị China Escalator nzukọ ngwaọrụ ụlọ ọrụ 3 ụlọ ọrụ na ndị na-eweta ya | Hongli
Ọrụ njikwa eletriki
E nwere ụdịdị abụọ. Ihe ngosi nke mbu bu ihe nlere anya kwesiri, nke abuo bu kwa mmezi. Ọ bụ ọnọdụ nkịtị mgbe etinyere plọg ndị niile na-adịghị arụzi ụlọ elu na ala. Amalitere onye mgbapụ ahụ, jiri mkpịsị ugodi zụta ndị ọrụ ahụ mgbe ọnweghị onye nọ na ya. Ndị ọrụ ahụ na-pịa bọtịnụ nkwụsị iji kwụsị onye na-ewepụ ya. Mgbe enweta akara igodo, a na-amalite ma na-agba ọsọ ọsọ. Ibepu otu n’ime ihe ndobeghi ndozi ma tinye igbe ndozi n’ime uzo ndozi. Onye ọrụ nwere ike iji igbe nrụzi mepee ubube ahụ. Enwere ike inwe otu igbe ọrụ n’ime ụlọ elu na nke ala. Ọ bụrụ na etinyere igbe ozi abụọ n'otu oge, igwe mbuli elu enweghị ike ịmalite.
Pedal nwere ike iji akwa nchara alloy anwụ ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara. N'ihi na o nwere ibu dị mfe, nkenke dị elu na ọdịdị mara mma. A na-eme polyurethane dị ike dị elu nke ejiri steepụ roller.
Chainkwụ nke ọkpọ na-adọnye akwa iji gbochie nchara. Akụkụ etiti ahụ na-akwado efere nkwado etiti etiti. A na-eji efere CNC eme ihe nkwado etiti. A na-eji okporo ụzọ na-eduzi etiti dị na profaịlụ, galvanized anti-rust.
Ngwa draịva na igwe mgbagharị na-eto eto. Dragọnụ mbanye na-achọ ezé gia iji mekọrịta. Ogwe draịva na-enye nsogbu kwesịrị ịbụ ihe yiri ya. Ndị na - ahụ maka osisi na - arụkwa ọrụ nke igbochi ndaghari. Ọ na-arụkwa ọrụ dị ka ebe a na-eme mkpọtụ, na-egbochi nzọụkwụ ịsụ ngọngọ na ndaghari.